Talooyin ku saabsan sida looga fogaado qaladaadkan Screen Common Green
1 Fikradaha & Resources
2 Fallaadha gan, Video Green Screen
3 Samee Video Screen Green
5 Khaladaadka Common
Farsamooyinka screen Green guud ahaan loo isticmaalo si ay u abuuraan jawi macquul ah iyo goobaha jeeda oo aan haysan si ay u duubaan on goobta. Taas macnaheedu waa in agaasime ku duubaan karo iyo actor ka dhanka ah screen cagaar ah, ka dibna dajiyaan video asalka ah inuu ciyaaro ka dambeeya actor ah. Marka si sax ah samayn, aad chroma kartaa furaha goobaha oo dhan iyada oo aan daynin qof ogaysiis in aadan goobta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad kaliya laga bilaabo filim screen cagaaran oo doonaya in ay abuuraan jawi been abuur ah mid macquul ah, waxaa jira qaar ka mid ah khaladaad in aad isaga ilaaliso si ay u caawiyaan goobaha aad eegto more xirfadeed iyo ka badan oo macquul ah.
Talooyin kaa caawinaya in aad kahortaga khaladaadka la filim Screen Green:
1. Xirashada dharka saxda ah
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah khaladaadka ugu fudud in dad badan oo ka samaysaa filim screen cagaaran si dhab ah xidhashada dhar cagaar ah. Haddii aad xirto dharka ama dharka ay ku badhamada ama lahjadda in ay yihiin midabka la mid ah cagaaran sida aad cagaaran asalka soo xulay, image ah in aad la odoroso gal shaashadda cagaaran ee post-tafatirka doonaa kale oo ey isku soo gaaray by Dhawaaq kuwaas oo aad dhar ama by dhar laftiisa. Tani waa weyn haddii aad rabto in aad ka gooyay qeyb ka mid ah jirka Jilaa ee, laakiin sidaas ma aha xirfad leh haddii aad isku daygooda in ay jilaa muuqan in goobta macquul ah.
2. qabsatay ee shaashadda
Qabsatay in aad shaashadda si dhab ah u horseedi karaa Hooskooda culus iyo tayada gurracan image. Haddii aad si joogto ah u laab aad screen oo cagaar ah lagu kaydiyo waa mid aad u muhiim ah in aad qaadataa bir baxay iyo guri screen cagaaran xun si looga hortago hadh, dhabtii aad background image. Tani waa tallaabo in badan oo ka bood badan, laakiin waxa muhiim ah in ay leeyihiin studio u gaar ah, a screen cagaaran oo tayo sare leh oo ah screen cagaaran diyaar aan qabsatay iyo laalaabka oo keeni Hooskooda.
3. Ka fikir aad iftiiminta
Marar badan oo hooskii ka muuqan karaa shaashadda cagaaran tuuray by hooska jilayaasha ah ee walxaha waxaa la geeyaa hore waxaa ka mid ah. Laydhka waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waxay saamaysaa aad u baahan tahay si ay u eegaan marka la isku dayayo in la abuuro goobaha screen cagaaran macquul ah. Hubi in la isticmaalo nalalka badan in ay helaan iyo xitaa la huriyo nidaamka guud aad ku xiran iyo guud ahaan shaashadda si ay u yareeyaan Hooskooda. Hubi si aad u eegto mawduuca aad ka soo baxay oo xagal isla camera iyaga ku soo gani doonaa garoonka iyo hagaajinta nalalka waa lagama maarmaan. Waxaad doonaysaa in aad caymis fiican xitaa iftiinka in hoos u dhigi doontaa hadh, ma keeni dhabtii markii image waxaa lagu dahaadhay shaashadda cagaaran. Waxaad mararka qaarkood hagaajin karaa iswaafaqla'aan nalalka in postproduction kaliya si la mid ah in aad xaalkaa lahaa image ah in Photoshop. Habkani waa waqti lumis sidaas darteed waa sida caadiga ah inta badan ka sahlan in la isticmaalo qalab nalal ah iyo in si xirfadeysan dheelitiri baxay nuurka yaraynta Hooskooda hor inta aanad bilaabin toogtay.
4. Iska ilaali isku dari kara mooshinka
Haddii aad ku talajirto in toogtay goobta tallaabo sare ee shaashadda hor cagaar leh camera in kaliya uu leeyahay xawaare hoose shutter, way kuu soo ordi karaa dhibaatooyin dhab ah. Marka kamarada hoose xawaaraha shutter ah ka fiirsan sameeyo darbo tallaabo dhaqaaq tartiib ah ama maadooyin si aan wax dhaq-dhaqaaq lama filaan ah hore ee shaashadda oo cagaar ah. Isku dari kara Motion qof dhaqaaqin si degdeg ah on camera hore ee shaashadda cagaaran runtii burburisay karaa goobta iyo burburisay xaqiiqo ah oo goobta. Sidoo kale waxa kale oo aad ka fiirsan karaan inay kiraysato camera sare shutter xawaaraha si looga fogaado isku dari kara mooshinkan haddii aadan ku talo badan oo ka mid ah goobaha tallaabo toogtay. Ugu dambayntii ay tani tahay wax aad u baahan doontaa in aad tijaabiso naftaada si aad heli kartaa dareento inta tallaabo camera aad xamili karaan shaashada cagaar ah oo aan isku dari kara mooshin.
5. Ka dhig darbo aad ku yiilleen
Marka aadan haysan wax badan oo screen cagaaran in ay la shaqeeyaan mararka qaarkood waxaa dhici kara in ciidamo ka mid ah caado ah in la raaco maadooyinka ka baxsan aagga screen cagaaran. Marka filim hore ee shaashadda cagaaran waxaad u baahan tahay in loo isticmaalo in ay ku ekaadaan darbo aad la shaashadda meel ee asalka ah. Waxaa suurto gal ah in la sameeyo wax soo saarka itusi post haddii actor ama maado tago deegaanka screen cagaaran on camera laakiin tani waxay ku lug yeelan kartaa raadin element kasta oo lagama helin shaashadda cagaaran si ay u superimpose image ka dib ka hor image asalka aad ku talo jirto socda shaashadda cagaaran. Ha ka baqin inaad samayso badan qaadataa oo aad u fiirsada isticmaalaya shaashad weyn oo doog ah haddii aad dareentid in maadooyinka si joogto ah oo ay maraan jidkii ka mid ah meelaha asalka samaynta.
6. U qasad darbo aad ka danbeeyay mawduuca
Wixii tayada xirfadeed darbo screen cagaaran dhab ahaantii laga yaabaa in aad u yara yaabay in ay ogaadaan in filimo badan oo aan run ahaantii duubaan jilayaasha, laakiin waxa kaliya ka danbeeya Actorada. Helitaanka jilayaasha ama maado yara mowjadda iyo filim wax yar ka dambeeya jilayaasha meesha aad diiradda doonaa asalka iyo sidoo kale goobta ka sheegay in ka dhacaya hore ee shaashadda oo cagaar ah. Iyadoo ujeedadu ay diiradda shot kaliya ka danbeeya aad ku xiran ama actor aad si dhab ah u horseedi karaa darbo meel fog ka fiican marka la isticmaalayo screen cagaaran.
7. Dami fool camera
Haddii aad isticmaalayso kamerad digital ah iyada oo diiradda si toos ah ama sharpener ka fiirsan jeestay habkaani sida ay u abuuri doonto geesaha adag oo u dhexeeya jilayaasha iyo asalka. Haddii aad jeclaan lahayd jilayaasha maadooyinka in la xeelad ku qeexan, waxaa dhaanta inay thinking xirfadahaaga la diiradda camera iyo iska leh Caawiye digital sameeyo marka la isticmaalayo screens cagaaran.
8. Hubi siticmaalaan aad waqti ka hor
Kasta oo promps in aad rabto in aad isticmaasho la daah cagaaran waa in la ledhay ama ka hor waqtiga la soo xulay. Walxaha dhaldhalaalaan fikiri kartaa midabada screen cagaaran iyo xaqiiqo ee goobta qaado. Haddii aad ku talo isticmaalin wax walxaha dhaldhalaalaan u hubiso in ay waqti ka hor hoos u Dole ama waxaad la kulmi kartaa isagoo si xaalkaa qaar ka mid ah midabo ah ee wax soo saarka post. Tixgeli siticmaalaan aad waqti hore si aadan uga istaagi shaqo weyn tafatirka ee aad mashruuca.
9. nalalka badan oo la cadeeyay ku saabsan mowduuca
Haddii aad filim goobta qoraxdu la screens oo doog ah si xor ah u isticmaali backlight ah Iftiin ilaa profile actor ee iyaga u iftiimiyo badan oo dabiici ah oo lagu qanci. Dad aad u badan ayaa hilmaama in ay ka mid nalal dabiici ah goobta ku Actorada inay muujiso in xaqiiqo fiican. Dhig nuurka u ah si cadaalad ah ayaa ku dhow inay shaashadda oo qoyan oo doonnaa actor ka ka danbeeya, laakiin uma uu oggolaado in profile inuu ka eryo badan oo hoos oo kale. Tani waxay qaadan kartaa dhaqanka, laakiin waa saameyn weyn marka loo sameeyo si fiican.
10. Isticmaal nalalka ku haboon xitaa goobaha mugdiga ah
Ugu danbeyntii, haddii aad danaynayso in filim goobta madow leh shaashad cagaaran, sida goobta naxdin ah habeenkii ama goobta simulating dibadda ama qol mugdiga ah, waxaa laga yaabaa in aad wali u leeyihiin in ay ku duubaan goobta in nalalka dhexdhexaad ah, si ay u xaalkaa iftiiminta wax soo saarka post. Haddii aadan awoodin in aad si fiican u iftiimin actor iyo screen cagaaran si fiican, taasi waxay keeni kartaa in a background image ku taalay kaas oo noqon kara tayo aad u yar yahay wax soo saarka. Tafatirka goobta iyo waxa ka dib madawga mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ah in aad qabsan karto image oo aan u darbo ku taalay iyo in la hubiyo xaqiiqo ah fiicnaan doonaa. Waxaad u baahan doontaa in aad qaadato ku saabsan qaar ka mid ah tafatirka dhaqanka fiican si aad u hesho markaad joogto goobaha habeen ka hor inta iyaga eegto runtii qancin.
> Resource > Video > Common Khaladaadka Screen Green iyo sida looga fogaado Them